ဆွေးနွေးချက်:လဂွန်းအိန်၊ မဟာစော - ဝီကီပီးဒီးယား
နာမည်ကို လဂွန်းအိန် ဒါမှမဟုတ် စောလဂွန်းအိန် လို့ပြောင်းသင့်တယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၅:၃၅၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
The interwiki link and added infobox is about Viceroy Lagun Eain in Tabinshwehti-Bayinnaung regime, but this article is about General Lagun Eain of King Yazadarit regime in Ava-Hanthawady forty-years war. Thank you. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၇:၀၇၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
My bad in Myanmar history, thanks for info bro. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၂၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
For this page, English page and Burmese page refers different people. I think to modify, English page is needed to create and edit link. So, please help for this point. It isabit important. Htet Myo Myint (ဆွေးနွေး) ၁၃:၃၄၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC) Htet[အကြောင်းပြန်ရန်]
For Burmese page, the person referred in the content has different biography data like father name and so on. Biography data referred to person from English page and which is different from person referred in the content. Htet Myo Myint (ဆွေးနွေး) ၁၃:၃၇၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
I though it was the same person so i added infobox from en.wiki. I'm not good in history. So, you can just edit it. Thanks. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၃:၅၄၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Infobox has been moved toanew article "စောလဂွန်းအိန်". Ninja✮Strikers «☎» ၁၅:၂၈၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank you all. I still have difficulties with some operation. Bro Ninja✮Strikers, thank you for editing. Htet Myo Myint (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၃၊ ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:လဂွန်းအိန်၊_မဟာစော&oldid=339808" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၅:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။